Gal Portal Ardayga OAU www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Cusboonaysiinta: Wararka Dugsiga ee Hadda
Soo Gal Xariirka Ardayda OAU www.eportal.oauife.edu.ng/login.php Cusbooneysiintii Ugu Dambeysay
Filed in Akhbaarta iskuulka by Tifaftirayaasha TMLT Juun 18, 2021
Xayeysiiska! Kala soo bax JAMB CBT Software Hadda BILAASH!
Galitaanka Xariirka Ardayda OAU: Awoodda OAU waxay awood u siisay bogga ardayda. Iyo boggan wuxuu siiyaa dhammaan ardayda mustaqbalka ardayda macluumaad ku saabsan habsami u socodka hay'adda.
Sidoo kale, boggan, ardayda cusub iyo ardayda soo noqonaysa waxaa la siin doonaa ku dhowaad wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay waxbarashadooda ugu fududaato uguna fiicnaato hay'adda.
Jaamacadda Obafemi Awolowo (OAU)
Jaamacadda Obafemi Awolowo (OAU) waxaa horay loo yiqiinay Jaamacadda Ife. Waana dawlad federaal ah oo ay leedahay oo maamusho jaamacadda Nigeria. Sidoo kale, jaamacadu waxay ku taal magaalada qadiimiga ah Ile-Ife, Gobolka Osun, Nigeria.
Jaamacadda waxaa la aasaasay 1961 waxayna fasalada bilaabeen Oktoobar 1962 sidii Jaamacadda Ife. Tanina waxay ahayd dowlad-goboleedka Galbeedka Nigeria, oo uu hoggaaminayo caaqil daahay Samuel Ladoke Akintola. Waxaa loo beddelay Jaamacadda Obafemi Awolowo University 12-kii Maajo 1987.
Si kastaba ha noqotee, magacaabista ayaa sharaf u ah Chief Obafemi Awolowo (1909-1987), ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Gobolka Galbeedka Nayjeeriya, oo maskaxdiisa ay jaamacaddu ahayd.
Galitaanka Xariirka Ardayda OAU
Sidoo kale, https://eportal.oauife.edu.ng/home.php
Dulmarka guud ee Galitaanka Ogolaanshaha Ardayda ee OAU
Si aad u gasho ama u gasho bogga gelitaanka OAU, waa inaad marka hore ogaataa.
Xiriirinta bogga OAU Ogolaanshaha - www.eportal.oauife.edu.ng
Boggu wuxuu siiyaa macmiilo ardayga cusub, ardayga soo noqonaya. Shaqaalaha (shaqaalaha waxbaridda iyo kuwa aan wax baranba). Sida;
1. Hubi / Abuur RRR bixinta
Waa maxay macnaha RRR? RRR waxay u taagan tahay si fudud Tixraaca Soo Celinta Remita. Waxaad si fudud oo dhakhso leh u hubin kartaa heerkaaga lacag bixinta ee Remita. Tanina waa adigoo gujinaya batoonka RRR Link kaas oo lagu bixiyo boggan.
Boggan wuxuu kaa caawinayaa inaad hubiso / abuurto xaaladda lacag-bixinta ee Remita si loo xaqiijiyo bixinta Lacagta OAU.
2. Soo Celinta Galitaanka Ardayga / Galitaanka Ardayda Cusub
Hawsha kale ee muhiimka ah waxay tahay inay siiso ardayda machadkan weyn ee tacliimeed, marin toos ah ugu heysa shaashadooda. Si kastaba ha noqotee, ardayda aan garanaynin sida ama meesha laga galo shaashadda qadka tooska ah ee OAU, OAU waa meesha ay tahay inaad ahaato.
Sidoo kale, waxay siisaa ardayga xiriir sahlan oo toos ah diiwaangelinta ardayda OAU Portal.
3. Diiwaangelinta Koorsooyinka Semesterka
Bogga OAU wuxuu ardayda siiyaa fursad fudud oo ay si dhakhso leh ugu diiwaan gelin karaan koorsooyinkooda simistar iyo diiwaangelinno kale oo muhiim ah.
Sidoo kale, boggan, waxaa lagaa siin doonaa xiriiriye ah diiwaangelinta Semesterka OAU, oo ay ku jiraan kuwa soo socda sida hoos ku taxan;
Xarumaha waxbarashada OAU.
Sidoo kale, ardayda diiwaangashan OAU.
Intaa waxaa sii dheer, ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadeed.
Intaa waxaa sii dheer, OAU waxay qirtay ardayda jaamacadda dhigata.
Dheeraad ah, diiwaangelinta imtixaanka.
Sidoo kale, koorsooyinka OAU u diiwaangashan Imtixaanka.
4. Codsiga Ogolaanshaha OAU
Waxaad hadda codsan kartaa gelitaanka OAU iyada oo loo marayo bogga OAU. Markaad codsaneyso ogolaanshaha, waxaa lagu siin doonaa waxyaabaha soo socda:
Liiska Barnaamijyada OAU.
Sidoo kale, liiska xarumaha daraasadaha OAU, halkaas oo aad ka arki karto xarunta kuugu dhow.
Intaa waxaa sii dheer, hage sida loo dalbado barnaamijyada shahaadada koowaad.
Sidoo kale, hagaha barnaamijka qalin-jabinta.
Dheeraad ah, sida loo hubiyo Aqoonsiga Gaarka ah.
Sida loo galo Bogga Ogolaanshaha OAU
Gali Lambarkaaga Diiwaangelinta (Lambarka Matric) ama Aqoonsiga Shaqaalaha sida UserId ee bogga galitaanka.
Ardayda Fresh, galitaanka ugu horeeya wuxuu kaaga baahan yahay inaad u isticmaasho Diiwaangelintaada UME Maya (tusaale. 12345678ZZ) ama Diiwaangelinta Hore ee Darajada Maya (tusaale ahaan PDP05 / 9999) oo ah Password. Waxaa lagugula talinayaa inaad u bedesho Password-kaaga aad rabto isla markaaba soo galitaankaaga ugu horreeya uu guuleysto.
Tani aad ayey muhiim ugu tahay amniga Koontadaada.
Ardayda Soo Noqota, galitaanka koowaad wuxuu kaa doonayaa inaad u isticmaasho taariikhda dhalashadaada qaab ahaan: DD / MM / YYYY Password ahaan. Waxaa lagugula talinayaa inaad u bedesho Password-kaaga aad rabto isla markaaba soo galitaankaaga ugu horreeya uu guuleysto. Tani aad ayey muhiim ugu tahay amniga Koontadaada.
Kadib guji GUDBI
Haddii soo galitaankaagu guuleysto, magacaaga waxaa lagu soo bandhigi doonaa Sawirkaaga Baasaboorka (haddii la heli karo). Haddii sawirku kaa yahay, waxaa lagugula talinayaa inaad u soo sheegto Sarkaalka Ogolaanshaha si loo saxo. Kadib Guji OKinaad sii wado.
Liiska shaqooyinka aad u qaban karto arday ahaan ayaa lagu soo bandhigi doonaa.
Guji mid kasta oo ka mid ah shaqooyinka sida ku habboon.
Markaad dhammeysato, guji SAXIIX OUT si aad uxirto kal-fadhigaaga galitaanka si aad uga hortagto in lagaa dhigo xisaabtaada.
Haddii aadan haysan KAAR AQOONSI Jaamacadeed, ku soo wargeli Xarunta Kombiyuutarka si aad si dhakhso leh uga shaqeyso.
Si aad u hesho hage dhammaystiran, Guji Halkan
Guji OK hoosta si aad ugu geyso BOGGA LOGIN
Fadlan la soco in MEEL GELINTA waxaa hadda laga heli karaa Koontadaada Shakhsiyeed.
Akhriso La Xiriira:
Sideen U Codsadaa Ogolaanshaha Bedelka Ardayda
Xariirka Jaamacadda Madonna
Xariirka Ardayda LASU
Deeqaha Jaamacadda Havard
Jaamacadda Federal Oye Oye Portal
Waxa La Sameeyo Markaad Joogto Portal OAU
Soo rar sawirka ardayga
Sidoo kale, soo saar koodhka dib-u-bixinta si aad u bixiso khidmadda iskuulka ee OAU isla markaana u diiwaangeliso koorsooyinka / imtixaannada
Intaas waxaa sii dheer, daabac kaarka Aqoonsiga ardayga OAU
Intaa waxaa sii dheer, daabac warqadda diiwaangelinta koorsooyinka / Imtixaannada
Sidoo kale, ka qaado warqadaha lagu shaabadeeyey xaruntaada waxbarasho
Intaa waxaa sii dheer, kala soo bax jadwalka O -U e-Exam / Pen-on-paper
Mar labaad, bilow inaad gudbiso TMAs la soo raray
Isku soo xoori oo ku arkey hoolka imtixaanka
Si kastaba ha noqotee, noqo mid bulsheed adigoo la wadaagaya qoraalkan dadka kale. Iyo, haddii aad hayso wax dareen ah iyo su'aalo ku saabsan Xariirka Ardayda OAU soo gal, fadlan si naxariis leh hoos ugu dheji faallo hoose. Waxaan uga jawaabi doonnaa sida ugu dhakhsaha badan.
Gali cinwaanka emailkaaga:
Waxaa soo gudbiyey TMLT NIGERIA
Ku soo biir in kabadan 3,500 000 + Akhristayaal khadka tooska ah hada!
=> KU SII CIYAARO Instagram | Facebook & Twitter WIXII KASOO Kordha
=> KHATAR WAQTIGEENA WAQTI XAQ AH
xayeysiis: CUDURKA JOOJI-OFF-KA 60 maalmood KALIYA! - HALKAAN KU SAMEE
DIGNIINTA XUQUUQDA! Waxyaabaha ku jira websaydhka dib looma daabici karo, dib looma soo saari karo, dib looma qaybin karo gebi ahaan ama qayb ahaan iyada oo aan la haysan ogolaansho ama aqoonsi sharci ah. Dhammaan waxyaabaha ku jira waxaa ilaaliya DMCA.
Waxyaabaha ku jira boggan waxaa lagu dhejiyaa niyad wanaagsan. Haddii aad leedahay mawduucan oo aad rumeysan tahay in xuquuqdaada xuquuqdeeda la jabiyay ama lagu xad gudbay, hubi inaad nagala soo xiriirto [[emailka waa la ilaaliyay]] inaad gudbiso cabasho ficillada isla markiiba waa la qaadayaa.
Cusboonaysiinta OAU ee COVID-19 Faafitaanka Shaqaalaha iyo Ardayda
COVID-19: OAU Waxay Bilaabaysaa Dareenka iyo Qeybinta Qalabka Gargaarka
Nidaamka Ujrada Lacagta Aqbalaada ee OAU ee loogu talagalay ardayda cusub ee 2019/2020
Khidmadaha Dugsiga Sare ee OAU ee Dugsiyada Sare ee 2019/2020 ee Ardayda Cusub iyo Soo Noqoshada
Shaqo qorista Jaamacada Obafemi Awolowo 2018 iyo Sida loo Codsado Jagooyinka banaan ee la heli karo
Shaqo qorista Jaamacadda Obafemi Awolowo 2017 | Sida loo Codsado Shaqo qorista Obafemi Awolowo University (OAU)
Shaqaaleysiinta Shaqaalaha Aan Aqoonta Ahayn ee Jaamacadda Obafemi Awolowo 2017 | Tilmaamaha Codsiga iyo Shuruudaha
Tags: muhiimada ay leedahay gelitaanka bogga oau ee ardayda, oau gelitaanka bogga ardayga, Jaamacadda Obafemi Awolowo, muuqaalka guud ee gelitaanka bogga oau ee gelitaanka
« Khadka Tooska ah ee Shaqaalaynta Caalamiga ah ee Fenix ​​2021/2022
Xariirka Shaqada ee Fenix ​​International 2021 www.fenixintl.com »